ọnwa: October 2018
site Ivy Oliver
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji South Africa bụ ala obi ụtọ, di iche iche, ma ọgaranya omenala uru. Ọ na-eme atụmatụ na nso 17 nde ọbịa gaa South Africa afọ gara aga naanị, na nke a bụ a ọnụ ọgụgụ nke ga-abụ na ọtụtụ na-eto eto nke afọ a. It’s a place of beautiful…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Kemgbe 10 afọ, ọtụtụ nde mmadụ chere na otú bara uru ọ bụ na-a ụgbọ okporo ígwè! Rich ubi nke greenery, sachaa coastlines na pristine ugwu kpụkọtara ọnụ na na-mgbe e kwuru n'akwụkwọ ma ọ bụ blọọgụ. Ewere ụgbọ okporo ígwè bụ a fun, adaba na a obere akpa-enyi na enyi ụzọ…
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji Otu n'ime ihe ndị kacha mma ihe banyere Italy dị ka a ezumike ebe bụ na ọ bụghị ihe ị na nanị ọkọ anya gị ịwụ ndepụta. Ị nwere ike laghachi Italy ugboro ugboro ma ka na-enweghị ezu nke a ọmarịcha ala na ya na-atọ ụtọ n'ego ụgbọ, ma ọ bụ…
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Na ọtụtụ elu profaịlụ, ọtụtụ mba ndị dị ka France, Germany, na Switzerland, sịkwa Austria bụghị e na-dị ka ukwuu anya! Ọ dị mma, Italy mgbe n'ezie na dara apụ map, ma ụgbọ okporo ụzọ si Austria ka Italy n'aka e leghaara anya. ma, na nke ahụ bụ ihe…